Otu esi ebudata & Wụnye Fedora 35 & GNOME 41 site na USB Bootable Disk - LinuxCapable
November 3, 2021 October 22, 2021 by Jọshụa James
Budata onyonyo diski Fedora 35
Wụnye Fedora 35 Site na USB Bootable Drive
Nnọọ na Fedora (Malite)
Nnọọ na Fedora 35 (Ntọlite ​​Asụsụ)
Ịdọ aka ná ntị ngwa ntọhapụ tupu ahapụ
Nchịkọta nwụnye (Nlebanya mbụ)
Ebe nwụnye (Ntọala draịvụ ike)
Nchịkọta nwụnye (Nlebanya nke abụọ)
Malite & Mezue Ohere nwụnye
Fedora 35 Mbido oge mbụ
Nabata na Fedora Linux 35 (Mmalite nke Ntọala)
Ebe nchekwa ndị nke atọ
Jikọọ Akaụntụ Ọnlaịnụ gị
Banyere Gị (Mepụta aha njirimara)
Melite Fedora 35 (Akwadoro nke ukwuu)
Anya mbụ nke GNOME 41
Fedora 35 ewetala ya ọtụtụ nkwalite karịa onye bu ya ụzọ na GNOME 41, Linux Kernel 5.14, yana ọtụtụ nkwalite ndị ọzọ n'ihu na azụ azụ nke mere ka mwepụta ọhụrụ ahụ dị ngwa ngwa, ngwa ngwa na ike ọ bụghị naanị na ụdị desktọpụ mana. dịkwa iche iche nkesa yana atụnyere Fedora 34 tozuru oke.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme tinye Fedora 35 na PC zuru oke nzọụkwụ, nseta ihuenyo site na ịmepụta draịva bootable USB iji wụnye na nhazi oge mbụ.
Ọrụ mbụ bụ ịga na saịtị gọọmentị na budata ụdị ọrụ desktọpụ nke Fedora 35.
Rịba ama, n'oge nkuzi ugbu a, Fedora na-egbu oge otu izu. Nke a ga-abụ Fedora 35 na agaghịkwa edobe ya dị ka beta.
Nzọụkwụ ọzọ mgbe ị ebudatara nhọrọ nke Fedora 35 ihe oyiyi diski bụ ịmepụta ya ka ọ bụrụ eriri USB nke nwere ike ịga n'ihu na nrụnye. Ugbu a, ọtụtụ nhọrọ dị na Rufus ma ọ bụ BalenaEtcher. Nkuzi a ga-eji balenaEtcher n'ihi na ọ bụ n'efu, kwadoro nke ọma, yana kwụ ọtọ. Uru ọzọ bụ na a na-akwado mmemme ahụ Windows, Mac OS, na Linux.
Otu esi ebudata & Wụnye Ubuntu 21.10 Imish Indri 26
Họrọ onyonyo Fedora 35 ebudatara, wee gaa n'ihu ịhọrọ ebumnuche ịchọta mkpanaka USB wee kụọ ọkụ.
Ozugbo ị nwere USB bootable mbanye, malite PC gị, nke ga-emecha kpọga gị na windo nhọrọ nhọrọ mbụ.
Pịa ugboro abụọ "Wụnye na Hard Drive" ịga n'ihu ọ gwụla ma ịnwale Fedora 35 mbụ.
Ekwesịrị ịme nhọrọ nhọrọ kacha mma na ndabara ma ọ bụrụ na ejikọrọ na ịntanetị. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịhazi ma họrọ asụsụ gị site na ịgagharị na listi ma ọ bụ jiri igbe nchọ ngwa ngwa dị n'okpuru.
Fedora egbuola oge mwepụta nke OS 35 maka izu ọzọ n'oge nkuzi a ka ị nweta ịdọ aka ná ntị a. Ka ọ dị ugbu a, BETA fọrọ nke nta ka ọ dị njikere ime ka ọ wepụta ọkwa.
Pịa na "Achọrọ m ịga n'ihu." ịga n'ihu na nrụnye.
Nrụnye nrụnye na-egosi kpọmkwem ihe a ga-emecha. Ebe ọ bụ na ị haziela ngalaba nhazi mpaghara, ihe fọdụrụ bụ ịhazi ebe nwụnye sistemụ.
Iji gaa n'ihu, pịa "Ebe nwụnye."
Ozugbo n'ime echichi ebe nhazi window, ọ na-ukwuu na-atụ aro ka pịa "Emela" button maka ọtụtụ ọrụ. Ihe kpatara ya bụ Fedora na ọtụtụ nkesa Linux na-arụ ọrụ magburu onwe ya n'ịhazi akwụkwọ ndekọ aha.
Agbanyeghị, ndị ọrụ nwere ike họrọ "Tinye diski" ịgbakwunye ma ọ bụ hazie nrụnye ma ọ bụ mepụta akụkụ, mana nkezi onye ọrụ, dị ka ekwuru, kwesịrị ịwụpụ nke a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ na Linux.
Pịa draịvụ ike wee pịa ya “Emela” bọtịnụ.
Mgbe ịtọlitechara ebe nrụnye, a ga-eweghachi gị na windo nchịkọta nrụnye. Site n'oge a, ị nwere ike nyochaa nke ọ bụla n'ime nhazi nhazi nke ị meworo, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ha.
Ozugbo ị nwere obi ụtọ ịga n'ihu, pịa "Malite nwụnye" bọtịnụ.
Nwụnye ga-amalite ugbu a, dabere na ngwaike na akụrụngwa PC gị. Nke a nwere ike iwe ọtụtụ nkeji ma ọ bụrụ na ọ bụghị ogologo oge.
Ị nwere ike ịpụ n'enweghị nsogbu n'ihi na ọ nweghị mkpali ga-ebilite n'oge akụkụ a ruo mgbe emechara ya, dịka na ọmụmaatụ n'okpuru.
Pịa bọtịnụ “mechaa nwụnye” ozugbo echichi ahụ mechara.
Site na ndabara, usoro nrụnye anaghị emegharị sistemụ gị ozugbo iji mezue nrụnye, yabụ ị ga-eji aka mee nke a. N'elu akuku aka nri pịa Akara ike> Gbanyụọ / Wepụ> Malitegharịa ekwentị…
Ozugbo ịmalitegharịrị sistemụ Fedora 35 gị, ị tinyela Fedora 35 nke ukwuu na sistemụ gị n'oge a. Akụkụ ndị a ga-ekpuchi oge izizi na emelite.
Akụkụ ọzọ nke ịwụnye Fedora 35 maka oge mbụ ozugbo ị malitegharịrị sistemụ ahụ bụ imezue oge izizi. Ọ bụrụ na ị na-eme ngwa ngwa ma hapụ ọtụtụ nhọrọ nhazi, ị nwere ike ịlaghachi na ndị a ma dozie ha n'ọdịnihu.
Iji malite, pịa "Malite Ntọala" bọtịnụ.
Site na ndabara, ma nhọrọ nke Ọrụ ebe na Mkpesa nsogbu akpaaka na-na. Maka ụbara nzuzo, ị nwere ike gbanyụọ ndị a.
Pịa na "Osote" bọtịnụ ga n'ihu.
N'akụkụ a, ị nwere ike ịme nkwado nchekwa ndị ọzọ. Nke a nwere ike inye aka ịwụnye ngwungwu efu na enweghị n'efu (nke nwe) dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ngwa ama ama. Site na ndabara, agbaghị nke a. Otú ọ dị, a na-atụ aro ka ịgbanwuo nke a ọ gwụla ma ị nwere obi ike na ị nwere ike iji aka tinye ebe nchekwa ndị a n'ọdịnihu.
Jikọọ Google, Nextcloud, ma ọ bụ akaụntụ Microsoft. Enwere ike ime nke a ma emechaa ma nwee ike ịwụpụ.
Jikọọ akaụntụ ma ọ bụ pịa ya Kwuo " bọtịnụ ịnọgide.
Tinye aha gị. Site na ozi a Fedora, ga-emepụta aha njirimara atụpụtara nke ị nwere ike gbanwee ma ọ bụ gbanwee ka ọ masịrị gị ma emechaa.
Dị ka aha ahụ na-egosi, tọọ paswọọdụ maka aha njirimara nke ị mebere. Dị ka o kwesịrị, nke a kwesịrị ịnwe mkpụrụedemede, ọnụọgụ na akara edemede maka nchekwa okwuntughe.
N'oge a, ịmechara nhazi oge mbụ ma nwee ike ịga n'ihu iji ma ọ bụ hazie nhazi Fedora gị. Dị ka o kwesịrị, mgbe ị na-etinye sistemụ arụmọrụ ọ bụla, ị kwesịrị ịlele ozugbo maka mmelite wee budata / wụnye ha n'ihi na ha na-enwekarị nnukwu ndozi ahụhụ yana, nke ka mkpa, mmelite nchekwa.
Mara, ozugbo emechara, a ga-enye gị ihuenyo na-adụ ọdụ ka ị gaa njem GNOME 41 ọhụrụ.
Pịa "Mba, daalụ" ma ọ bụrụ na ị na-achọsi ike ịhụ atụmatụ ọhụrụ.
Ugbu a ị nọ na desktọpụ Fedora 35 gị, ị na-achọsi ike iji sistemụ gị. Nke mbụ, mepee ọnụ Fedora gị site na ịga na akuku aka ekpe elu na ịpị na ịpị Ihe omume > Pịnye ka ịchọọ > Nkwụsị.
Ugbu a ị nọ na ọdụ gị, ka ịlele maka mmelite, ị ga-eji ya “Nkwalite dnf – nweta ume” nye iwu dika n'okpuru.
Mara, a ga-akpali gị itinye paswọọdụ gị.
Na-esote, ị ga-enweta nsonaazụ mmelite. Dabere na afọ nke ngwugwu nrụnye sitere na Fedora, nke a nwere ike ịbụ nnukwu ma ọ bụ obere. Ọ dịgasị iche. N'oge nkuzi nkuzi, nha buru ibu (1.1GB) ka Fedora egbuola otu izu, yabụ emelitebeghị ngwugwu nrụnye n'oge.
N'ọdịnihu, nke a ga-adị ntakịrị karị.
Ihe atụ nke mmelite:
ụdị Y, pịa pịa Tinye igodo ịmalite usoro mmelite. Nke a mara mma nke ukwuu na akpaghị aka, ma ọ dịkarịghị mkpa ka ị tinye aka. Dabere na ngwugwu ole chọrọ imelite, usoro a agwụla ngwa ngwa.
Ụfọdụ ngwugwu chọrọ nrụgharị sistemu, ọkachasị na mmelite Linux Kernel. Ka ịmalitegharịa, jiri usoro ịmalitegharị eserese nke egosiri na mbụ na nkuzi ma ọ bụ jiri iwu na-esonụ na njedebe gị ozugbo mmelite ahụ mechara.
GNOME 41 dị ugbu a na Fedora 35, nke a ewetala mgbanwe ụfọdụ na eserese, ngwa, na anya UI. N'okpuru bụ ụfọdụ nseta ihuenyo.
Ọmụmaatụ nke desktọpụ:
Ọmụmaatụ nke ngwa ngosi:
Ọmụmaatụ nke ntọala windo ọtụtụ ọrụ agbasawanye:
Nhọrọ, iji kwado nrụnye, ị nwere ike ịchọta ozi sistemụ gị na “Banyere” ihuenyo dị na ntọala sistemụ. N'aka nke ọzọ, ngwungwu ọzọ bara uru ịwụnye bụ Neofetch. Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Fedora 35 na nhazi oge mbụ na melite sistemụ gị site na iji njikwa njikwa ọnụ kama ịdabere na GUI iji melite sistemụ gị.
N'ozuzu, arụmọrụ Fedora 35 dị kilomita n'ihu Fedora 34 nwere nkwalite azụ azụ. Isi ala nke GNOME 40 ka edobere na GNOME 41 na-eme ka ntọhapụ a nwee mmetụta dị nro ma dị ike ma e jiri ya tụnyere mwepụta ndị na-adịbeghị anya.
Categories Fedora Tags Fedora 35, GNOME Mail igodo